Fahafantarana ny adiresy fanoratana, fanamarinana ary API fanamarinana ny fandefasana | Martech Zone
Zoma, Jona 26, 2020 Alatsinainy, Novambra 2, 2020 Douglas Karr
Talohan'ny niasana an-tserasera dia niasa nandritra ny folo taona tao amin'ny indostrian'ny gazety sy ny mailaka mivantana aho. Satria lafo tokoa ny fandefasana mailaka na fandefasana fifandraisana ara-batana ara-batana, dia nitandrina mafy izahay momba ny fahadiovan'ny data. Izahay dia nitaky sombin-trano iray isaky ny isan-trano, tsy mihoatra izany intsony. Raha nandefa andian-kaonty mailaka mivantana tany amin'ny adiresy iray izahay, dia niteraka olana maro izany:
Mpanjifa mahasosotra izay misafidy ny serasera marketing rehetra.
Fandaniana fanampiny amin'ny paositra na fandefasana miaraka amin'ny vidin'ny fanontana fanampiny.
Matetika, nitaky anay ny famerenana ny volan'ny mpanao dokam-barotra rehefa nandefa fandefasana mitovy izy ireo.
Ho fanampin'izay, ny adiresy izay tsy feno na diso dia nitaky famerenam-bola ary tsy ilaina koa ny fandefasana entana.
Manodidina ny 20% amin'ireo adiresy niditra an-tserasera no misy lesoka - lesoka amin'ny tsipelina, isa isan-trano, kaodim-paositra tsy marina, lesoka famolavolana izay tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny paositra iray. Izany dia mety hiteraka fandefasana tara na tsy azo atolotra, ahiahy lehibe sy lafo ho an'ireo orinasa manao asa an-trano sy any amin'ny sisin-tany rehetra.
Address fanamarinana Tsy dia mora araka ny andrenesana azy anefa. Ankoatry ny olan'ny tsipelina, isan-kerinandro dia misy adiresy vaovao miampy amin'ny tahiry nasionaly misy adiresy azo entina ao amin'ny firenena. Misy koa ny adiresy novaina, satria miova ny tranobe manomboka amin'ny varotra ka hatramin'ny fonenana, na ny fianakaviana tokan-tena ka hatramin'ny ankohonana misy fianakaviana maro, ny tanimboly dia zarazaraina ho mpifanolo-bodirindrina aminy, na ny faritra manodidina manontolo dia havaozina.
Dingana fanamarinana adiresy
Voarara ny adiresy - ka ny fisarahana an-trano, ny adiresy, ny fanafohezana, ny tsipelina diso, sns.
Ny adiresy dia natao fenitra - rehefa vita ny fizarana azy dia averina amina fenitra iray indray ny adiresy. Tena manakiana izany satria 123 Main St. ary 123 Main Street dia hatao manara-penitra ho 123 Main St. ary ny duplicate azo ampifanarahana sy esorina.
Voamarina ny adiresy - ny adiresy namboarina dia ampifanarahana amin'ny tahiry nasionaly mba hahitana raha tena misy izy io.
Voamarina ny adiresy - tsy ny adiresy rehetra no azo alefa na dia misy aza izy ireo. Ity dia olana iray ananan'ny serivisy toa ny Google Maps… manome anao adiresy mety izy ireo nefa mety tsy misy firafitra hatolotra anao akory.
Inona no atao hoe Validation amin'ny adiresy?
Ny fanamarinana adiresy (fantatra koa amin'ny hoe fanamarinana adiresy) dia dingana iray izay manome antoka fa misy ny adiresy amin'ny arabe sy paositra. Ny adiresy iray dia azo hamarinina amin'ny iray amin'ireo fomba roa: eo alohany, rehefa mitady adiresy tsy marina na tsy feno ny mpampiasa iray, na amin'ny alàlan'ny fanadiovana, famaritana, fampitoviana ary famolavolana data ao anaty tahiry mifanohitra amin'ny angon-drakitra paositra.
Inona ny fanamarinana adiresy? Tombontsoa sy tranga fampiasana nohazavaina
Adiresy fanamarinana vs Validation amin'ny adiresy (Definition ISO9001)
Tsy mitovy anefa ny serivisy adiresy rehetra. Serivisy fanamarinana adiresy maro no hampiasa fomba fanao hifanaraka amin'ny tahiry. Raha atao teny hafa, serivisy dia mety milaza fa ao anatin'ny zip 98765 dia misy a Main Street ary manomboka amin'ny adiresy 1 ary mifarana amin'ny 150. Vokatr'izany, 123 Main St dia a manan-kery tokantrano mifototra amin'ny lojika, fa tsy voatery a voamarina adiresy ahafahana mandefa zavatra.
Olana ihany koa amin'ny serivisy manome latitude sy longitude misy adiresy manokana. Ny ankamaroan'ireo rafitra ireo dia mampiasa matematika mba hampifangaro lojika ny adiresy amin'ny sakana iray ary hamerina ny latitude sy ny longitude. Satria ny mpivarotra ambongadiny, trano fisakafoanana ary serivisy fanaterana dia mampiasa lat / long ho an'ny fanaterana ara-batana, izay mety hiteraka olana taonina. Ny mpamily iray dia mety ho eo amin'ny antsasa-manilan'ny sakana ary tsy afaka mahita anao mifototra amin'ny angona azo antoka.
Data momba ny adiresy misambotra
Miara-miasa amin'ny serivisy fanaterana aho amin'izao fotoana izao izay mampidiran'ny mpanjifa ny mombamomba ny adiresy manokana, manondrana fanaterana isan'andro ny orinasa, ary avy eo mampandeha azy ireo mampiasa serivisy hafa. Isan'andro, am-polony ny adiresy tsy azo atolotra izay tsy maintsy ahitsy ao anatin'ny rafitra. Fandaniam-potoana ity satria misy rafitra afaka mitantana an'io.
Rehefa manatsara ny rafitra izahay dia miasa manara-penitra sy manamarina ny adiresy amin'ny fidirana. Izay no fomba tsara indrindra hiantohana ny fahadiovan'ny data-nao. Asehoy ny adiresy fandefasana efa voamarina sy voamarina amin'ny mpanjifa amin'ny fidirana ary asaivo manaiky izy ireo fa marina izany.
Misy fari-pitsipika roa izay tianao ho hitanao fa ampiasain'ny sehatra:
Fanamarinana CASS (Etazonia) - Ny Coding Accuracy Support System (CASS) dia ahafahan'ny United States Post Service (USPS) manombatombana ny maha-marina ny rindrambaiko manitsy sy mifanitsy amin'ireo adiresy an-dalambe. Ny fanamarinana CASS dia atolotra ho an'ny mailer rehetra, biraon'ny serivisy ary mpivarotra rindrambaiko izay maniry ny USPS hanombatombana ny kalitaon'ny rindrambaiko mifandraika amin'ny adiresy ary hanatsara ny maha-marina ny ZIP + 4, ny zotram-pitaterana ary ny kaodin'izy ireo dimy isa.
Fanamarinana SERP (Canada) - Ny programa lozisialy sy fanombanana rindrambaiko dia fanamarinana paositra navoakan'ny Canada Post. Ny tanjony dia ny fanombanana ny fahafahan'ny rindrambaiko sasany manamarina sy manitsy ireo adiresy mailaka.
API fanamarinana adiresy
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, tsy ny serivisy fanamarinana adiresy rehetra no noforonina mitovy - ka tena tianao ny mijery an'izay olana mety hitranga. Ny fitsitsiana vola kely vitsivitsy amin'ny serivisy maimaimpoana na maimaim-poana dia mety hiteraka dolara amin'ny olan'ny fandefasana any ambany.
Melissa dia manolotra serivisy fanamarinana adiresy maimaim-poana mandritra ny enim-bolana (firaketana hatramin'ny 100K isam-bolana) handaminana ireo fikambanana ilaina miasa manohana ireo vondrom-piarahamonina mandritra ny areti-mandringana COVID-19.
Melissa COVID-19 Fanomezana fanompoana
Ireto ny API malaza kokoa amin'ny fanamarinana adiresy. Ho hitanao fa sehatra malaza iray no tsy voatonona - Google Maps API. Izany dia satria tsy serivisy fanamarinana adiresy, a geocoding fanompoana. Na dia manara-penitra sy miverina latitude sy longitude aza izy dia tsy midika izany fa adiresy ara-batana azo atolotra.
Easypost - Fanamarinana adiresy amerikana sy fanamafisana ny adiresy iraisam-pirenena mitombo haingana.
Experian - adiresy fanamarinana ireo firenena sy faritany miisa 240 mahery manerana an'izao tontolo izao.
fiderana - Miaraka amin'ny angon-drakitra avy amin'ny firenena 240 manerana an'izao tontolo izao, manamarina ny adiresy anatiny sy iraisam-pirenena i Lob.
Hiditra - adiresy vahaolana amin'ny fanamarinana izay hisambotra, hamaky, hanara-penitra, hanamarina, hanadio ary hanangona tahiry adiresy ho an'ny firenena sy faritany 245 mahery.
Melissa - manamarina ny adiresy ho an'ny firenena sy faritany 240+ amin'ny fotoana idirana sy andiany mba hiantohana ny adiresy faktiora sy fandefasana marina ihany no tratra sy ampiasaina ao amin'ny rafitrao.
SmartSoft DQ - Manolotra vokatra mitokana, API fanamarinana adiresy ary fitaovan-tserasera izay hiditra mora foana amin'ireo rindranasa miankina amin'ny adiresy misy anao.
SmartyStreets - Manana adiresy an-dalambe API API, Zip Code API, Autocomplete API, ary fitaovana hafa hampidirina ao anaty rindranasao.
TomTom - Ny fampiasa fangatahana geocoding an'ny TomTom Online Search dia manolotra vahaolana mora ampiasaina amin'ny fanadiovana ny angon-drakitra adiresy sy fananganana tahiry data misy toerana misy azy.
Tags: adiresy apiadiresy dataadiresy geocodingresaka parsingadiresy fanamarinanafanamafisana ny adiresyfanamarinana adiresyeasypostisoxnumxlobloqatedata Melissasmartsoft dqtomtom